१० बर्षमुनिका बालक पनि 'पुरोहित' ! के यो चाहीं श्रमशोषण भएन र ? (फोटो कथा)
ARCHIVE, INVESTIGATION » १० बर्षमुनिका बालक पनि 'पुरोहित' ! के यो चाहीं श्रमशोषण भएन र ? (फोटो कथा)
काठमाडौँ - जनैपूर्णिमाको दिन बिहानैदेखिनै निकै भीडभाड देखिन्थ्यो पशुपतिनाथ परिसरमा । जनै फेर्नेदेखि धागो बाँध्नेहरुको भीड । यो भीडको अर्को पाटो जनै फेरिदिन वा डोरो बाधिंदिन बसेका पुरोहित । आज पशुपतिमा केहि फरकखालका पुरोहित पनि देखिए । १० बर्षभन्दा मुनिका बालबालिका पनि भेटिए पुरोहितका रुपमा पशुपतितिर ।
साना पुरोहितहरुदेखेपछी हामी पनि उनीहरुसँग कुराकानी गर्न तम्सियौं । तर अधिकांस हामीसँग बोल्न मानेनन् । जति बोले पैसा कमाइन्छ भनेर बसेको उत्तर आयो । हामीसँगको कुराकानीमा कतिपयले आफ्नो ब्रतबन्ध पनि नभएको स्वीकारे ।
हाम्रो सरोकार, के योचाहिं श्रम शोषण भएन र ?
बाँकी तस्विरमा :
प्रकाशित : Friday, July 28, 2017
Tags : ARCHIVE, INVESTIGATION